manje Rabcat uye wethula kokuvikela wake okuthakazelisayo castle Umakhi slot zabo, nge slot uzifanekisela osesikhundleni Castle Builder 2. Lo mdlalo kuthiwa ukuthuthukiswa nesika-esasisandulele, futhi ine, futhi na ngaphezulu, izici zokuthuthukisa inkokhelo yakho. Ungafunda okwengeziwe futhi ufunde kabanzi mayelana nale slot.
Ukwazi Okwengeziwe Isakhiwo Izinqaba ibhonasi khulula slot machine
Nge Castle Builder 2 unayo 3 imigqa, 5 reels futhi 15 paylines fixed. Uthola kule ezimbili amazinga khulula ibhonasi slot umshini. Izinga lokuqala nawe uhilelekile kuyo ngokukhetha phakathi izinhlamvu ezinkulu ezintathu. Lezi zinhlamvu babe nakho kwakwandile e inguqulo yasekuqaleni umdlalo.
Ekuqaleni, ulindeleke ukuba ukhethe omunye izinhlamvu ezimbili, okungukuthi Sam Mandy. Uma ezingeni lokuqala usuphothuliwe, muntu wesithathu phendla. Ngo ezingeni lokuqala, ngeke kudingeke futhi ukuba ukhethe indawo ukuqala. Imephu izokwethulwa ngawe banqume ukuthi baqale kusukela.
Lokhu slot anezinye izimpawu ongaphakeme-value ezifaka isitini, egwadle, slate netshe. I imifanekiso ephezulu ukubaluleka zibandakanya segolide, umqhele kanye esifubeni ngcebo. Ijubane lapho wakha izinqaba zakho kuyoba kuncike inani combos ngokuwina ukuthi ufike nge imifanekiso afanayo.
Wild Futhi scatter Izimpawu Woza omkhulu
Ngo Castle Builder 2 uphawu Wild imelelwa noma Sam noma Mandy. Lokhu kuyoba sincike ngabanye osikhethile kusukela ekuqaleni game. Nomaphi lapho isithonjana zasendle ukhetha, ke shintsha zonke ezinye izimpawu ukuze ungandisa amathuba kokwehla ngokuwina inhlanganisela.
Uphawu kuphela itolitji ukuthi wilds abakwazi esikhundleni, kuyinto isithonjana chitha. Isithonjana scatter uvezwa lapha njengoba Pink Mahhala Spin isithonjana. Kufanele wazi ukuthi lo slot ukwakhiwa yakho castle ivela ohlangothini kwesokunxele kwesikrini. I itolitji, Ngokolunye uhlangothi, kungabonakala nakulokho ohlangothini kwesokudla kwesikrini.
Nalokhu khulula ibhonasi slot machine, uzogcwalisa 8 grid kungabonwa ezansi kwesobunxele ekhoneni kwakho isikrini ukudlala. Lokhu kwenziwa uma ufike ngokuwina combos. Njengoba grid ayengezwa sekugcwele, ukwakhiwa yakho castle beyoba Usuqhubekile. With 8 grid egcwele, ukwakhiwa yakho castle ngoba umuntu ke ephelele.
Uyobe ayiswe isayithi ezahlukene, lapho kuzoqala nangenye ukwakhiwa castle uhlamvu oyikhethile. Uma zonke izinqaba kungenzeka umuntu lwakhiwe, uzokwenza kanjalo